Ento mivoaka ireto zavatra ireto – Tsodrano
1 Korintiana 1.22-25
Tian’i Jesosy ho ny voninahitr’Andriamanitra irery ihany noho ho hita .Tsy tantiny ny nahita ny mpivarotra nameno ny Tempoly. Mazàna ry havako isika ireo mpivarotra ireo tsy mijery afatsy ny ho antsika. Ny voninahitro, ny fahefako, ny tombony ho ahy izany no mahatonga ahy ao am-piangonana. Ny soa ho an’ny fiangonana aloha no mahamaika.
Fa hamarana ihany isika ery amin’ny andininy faha 23-25 dia voalaza fa nisy olona izay nino an’i Jesosy noho ny famatarana nataony. Nefa voalaza fa tsy nahatoky azy Jesosy dia hoy aho hoe : « Sao mba milaza ho mino an’i Jesosy isika nefa tsy hahatokisan’i Jesosy kosa. Aza anie izany ry havako !